Dacomitinib Dacomitinib ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - NSCLC ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ။ - AASraw
Dacomitinib ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - NSCLC ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ။
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/Dacomitinib ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - NSCLC ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ။
အပေါ် Posted 04 / 28 / 2021 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာအတွက် dacomitinib ကို FDA ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်
သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာအတွက် Dacomitinib လက်တွေ့လျှောက်လွှာ
ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာကုသမှု - Dacomitinib VS Gefitinib
အွန်လိုင်း Dacomitinib အမှုန့်ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။
Fသေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာအဘို့အ dacomitinib အတည်ပြုခဲ့သည် DA
စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈ တွင်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးမှူးသည် metastatic နှင့်အတူလူနာများအားပထမဆုံးကုသမှုအတွက် dacomitinib ဆေးပြား (VIZIMPRO, Pfizer Pharmaceutical Company) ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာ တစ် ဦး FDA က - အတည်ပြုစမ်းသပ်မှုများကတွေ့ရှိအဖြစ် epidermal ကြီးထွားမှုအချက် receptor (EGFR) နှင့်အတူ (NSCLC) 19 ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ် exon 21 L858R အစားထိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ။
အတည်ပြုချက်သည် dacomitinib ၏လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုကို gefitinib နှင့်လူနာ ၄၅၂ ဦး ရှိသည့် gefitinib နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို အခြေခံ၍၊ EGFR TKI ပါဝင်သည့်ကုထုံးပြီးပါကလူနာများသည်သွားဖုံးရောဂါသို့မဟုတ်တစ်ကျော့ပြန်ရောဂါများကိုအနည်းဆုံး ၁၂ လကြာရောဂါကင်းစင်ရန်ကြိုတင်ကုထုံးမလိုအပ်ပါ။ 1050 သို့မဟုတ် 01774721 တစ်ခုကအရှေ့သမဝါယမကင်ဆာအုပ်စုစွမ်းဆောင်ရည် status ကို; နှင့် EGFR 452 ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ် exon 12 L0R အစားထိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်း exon ။ dacomitinib ၄၅ မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရောဂါတိုးတက်မှု (သို့) လက်မခံနိုင်သောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်တိုင်အောင်တစ်နေ့တစ်ကြိမ် gefitinib 1 မီလီဂရမ်ကိုနှုတ်ဖြင့်လက်ခံရန်လူနာများကို (၁: ၁) ကျပန်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတိုးတက်မှု - အခမဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုသရုပ်ပြ; ခြုံငုံတုန့်ပြန်မှုနှုန်း (သို့) ခြုံငုံရှင်သန်မှုတိုးတက်မှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည် လွတ်လပ်သောပြန်လည်သုံးသပ်ရေးကော်မတီမှဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်းပျမ်းမျှတိုးတက်မှုမှလွတ်မြောက်ခြင်း။ အသီးသီး dacomitinib နှင့် gefitinib လက်နက်များအတွက် 14.7 နှင့် 9.2 လအတွင်း (; အန္တရာယ်အချိုး 0.59; 95% CI: 0.47, 0.74; p <0.0001) တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆေးညွှန်းတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များတွင် interstitial အဆုတ်ရောဂါ (ILD)၊ ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်အရေပြားဆိုင်ရာဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများအတွက်သတိပေးချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။ dacomitinib ကိုခံယူထားသောလူနာ ၃၉၄ ဦး တွင်ပြင်းထန်သောဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများကို ၂၇% တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ dacomitinib ကိုရပ်တန့်စေသည့်အတွေ့ရအများဆုံးဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများမှာ ၀ မ်းလျှောခြင်းနှင့် ILD တို့ဖြစ်သည်။ dacomitinib ၏အဖြစ်များဆုံး (> ၂၀%) ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများမှာ ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ အဖုအပိန့်များထွက်ခြင်း၊ stomatitis၊ အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းလာခြင်း၊ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ alopecia၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် pruritus တို့ဖြစ်သည်။
အဆုတ်ကင်ဆာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဆဲလ်မဟုတ်သောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းတို့အနက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွင် metastatic (သို့) အဆင့်မြင့်ဖြစ်သည်။ ။
EGFR ဆဲလ်များကြီးထွားခြင်းနှင့်သွေးခွဲကူညီပေးသည်တဲ့ပရိုတိန်းသည်။ EGFR မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသည်ပရိုတိန်းဓာတ်လွန်ကဲခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကင်ဆာဆဲလ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ EGFR ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ NSCLC အကျိတ်များ၏ ၁၀ မှ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အသုံးအများဆုံး activating ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသည် exon 10 နှင့် exon 35 L19R အစားထိုးခြင်းတွင်ဖျက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအတူတူလူသိများသော EGFR ဗီဇပြောင်းလဲခြင်း၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အတူတကွပါဝင်သည်။ ဤရောဂါသည်ရှင်သန်နှုန်းနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးရောဂါတိုးတက်မှုမှာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နေသည်။
AASraw သည် Dacomitinib ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
Dacomitinib သည်ဒုတိယမျိုးဆက် EGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI) ဖြစ်ပြီး EGFR / Her1, Her2 နှင့် Her4 အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းများကိုအခြား TKIs များနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မမှီခိုနိုင်အောင်တားဆီးပေးသည်။ ARCHER 1050 စမ်းသပ်မှုတွင်, gefitinib နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက dacomitinib အားဖြင့်တိုးတက်မှုမရှိသောရှင်သန်မှုကိုတိုးတက်စေပြီး၊ dacomitinib ကိုအဆင့်မြင့်ဆဲလ်မဟုတ်သောအဆုတ်ကင်ဆာအတွက်အဆင့်မြင့်ကုသမှုနည်းလမ်းအဖြစ်အထောက်အပံ့ပေးသည်။ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အဖြစ်အပျက်များနှုန်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆေးထိုးခြင်းလျှော့ချခြင်းသည် dacomitinib ၏ထိရောက်မှုကိုမလျှော့ချနိုင်သည့်အပြင်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပြင်းထန်မှုကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချနိုင်သည်။ EGFR-mutant non- ဆဲလ်သေးငယ်သည့်အဆုတ်ကင်ဆာ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောရှုခင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါက dacomitinib နှင့် osimertinib အကြားခေါင်းနှင့်ခေါင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်အကောင်းဆုံး TKI ကုသမှုအချိန်ဇယားကိုဆုံးဖြတ်ရန်သော့ချက်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်သည်။
သေးငယ်သောဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားကုသမှုနည်းလမ်းများ၊ ထိရောက်သောနည်းလမ်းများကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုစဉ်းစားစေခဲ့သည်။ Dacomitinib ကုသမှုကိုလူတိုင်းအားအကြံပြုလိမ့်မည်။ နောက်ကြည့်ရအောင် Dacomitinib:
Dacomitinib သည် (2E) -N-16-4- (piperidin-1-yl) but-2-enamide အဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယမျိုးဆက် tyrosine kinase inhibitors ၏ပါးစပ်အလွန်ရွေးချယ်သည့် quinazalone အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ epidermal ကြီးထွားမှုအချက် receptor မိသားစု kinase domains များ၏ ATP ဒိုမိန်း။ Dacomitinib သည်ဆဲလ်မဟုတ်သောအဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) ကိုကုသရန်အတွက်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် EGFR ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်နိုင်အောင်တားဆီးပေးသည်
Dacomitinib ကို Pfizer Inc မှတီထွင်ခဲ့ပြီး FDA က ၂၀၁၈ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ စာပေတွင်ပါရှိသည့်အထောက်အထားများအရနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော်လည်း epithelial သားအိမ်ကင်ဆာမော်ဒယ်လ်တွင် dacomitinib ၏ကုထုံးအလားအလာကိုအကြံပြုထားသည်။
ယခုအချိန်တွင် Dacomitinib အမှုန့် (CAS:1110813-31-4တရုတ်နိုင်ငံမှ AASraw မှထောက်ပံ့နိုင်သည်။
Dacomitinib သည်နောက်ပြန်ဆုတ်။ မရသောသေးငယ်သောမော်လီကျူး၏တားဆီးပေးသောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် HER receptors ၏ catalytic domains များတွင် covalent bonding မှတဆင့်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်တားစီးမှုကိုရရှိသည်။ dacomitinib ၏ဆှဖှေဲ့ 1 nmol / L တစ်ခု IC2 ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ErbB သို့မဟုတ် epidermal growth factor (EGF) မိသားစုသည် tyrosine မှတစ်ဆင့် Ras-Raf-MAPK, PLCgamma-PKC-NFkB နှင့် PI3K / AKT ကဲ့သို့သောမြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြမှုကူးပြောင်းသည့်လမ်းကြောင်းများကိုသက်ဝင်စေခြင်းဖြင့်အကျိတ်ကြီးထွားမှု၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 1% ခန့်တွင် carboxy-terminus.40 မှာ kinase- မောင်းနှင် phosphorylation EGFR ဗီဇ၏ amplification ပြသနှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 50% ကိုလက်ခံ၏ tyrosine kinase ဒိုမိန်းတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ် activation ထုတ်လုပ်သည့်ဖျက်မှုကိုကိုယ်စားပြုသော EGFRvIII mutation ကိုတင်ပြ။
Dacomitinib ကိုကုသရန်အတည်ပြုသည် - metastasized (ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ပျံ့နှံ့သွားသော) ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) ။ ၎င်းသည်အကျိတ်အချို့ EGFR မျိုးဗီဇဗီဇပြောင်းလဲခြင်းရှိသည်သောလူနာများတွင်ပထမအဆင့်ကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
dacomitinib ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်မိရန်အရေးကြီးသည့်အချက်များ -
▪လူအများစုသည် dacomitinib ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်မဟုတ်ပါ။
▪ Dacomitinib ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်၎င်းတို့စတင်ခြင်း၊ ကြာချိန်နှင့်ပြင်းထန်မှုတို့ကြောင့်မကြာခဏကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
▪ကုထုံးပြီးဆုံးပြီးနောက် Dacomitinib ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာတိုးတက်လိမ့်မည်။
▪ Dacomitinib ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုအတော်လေးစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ dacomitinib ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။
အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ dacomitinib သောက်သောလူနာများအတွက် (၃၀% ထက်ပိုသောအရာများတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်) -
ဤရွေ့ကား dacomitinib ကိုလက်ခံရရှိလူနာတွေအတွက် (10-29% တွင်ဖြစ်ပျက်) လျော့နည်းဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနေသောခေါင်းစဉ်:
▪လက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ခြေဖ ၀ ါးများနီခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်း
▪အားနည်း / စွမ်းအင်အားနည်းခြင်း
▪ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာခေါင်းလက္ခဏာများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအထက်ကူးစက်ခြင်း
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးကိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မဟုတ်ပါ။ အလွန်နည်းပါးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ - လူနာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင်ဖြစ်ပွားခြင်း - ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်မဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရပါကသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုအမြဲတမ်းအကြောင်းကြားသင့်သည်။
The Lancet Oncology မှာဖော်ပြထားတဲ့အဆင့် ၃ လေ့လာချက်အရ EGFR-positive၊ ဦး နှောက်မဟုတ်တဲ့ metastatic Non- သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) နဲ့ပထမအဆင့် dacomitinib သည်တိုးတက်မှု - အခမဲ့ရှင်သန်မှု (PFS) ကိုတိုးတက်စေသည်ဟုဆိုသည်။
gefitinib အပါအဝင်ပထမမျိုးဆက် EGFR-tyrosine kinase inhibitors (TKIs) သည်အဆုတ် adenocarcinomas ၏ ၁၀% မှ ၄၄% ကြားရှိ EGFR-position ရောဂါရှိသောလူနာများအတွက်ပထမအမျိုးအစားတွင်အသုံးပြုသည်။ ယခင်လေ့လာမှုကဒုတိယမျိုးဆက် EGFR-TKIs သည်မျိုးဆက်သစ်များထက်သာလွန်သည်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။
ဤပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသောကျပန်းလေ့လာမှုအတွက် (ARCHER 1050; ClinicalTrials.gov အမှတ်အသား - NCT01774721) သည်စာရေးသူများမှမှတ်ချက်ပြုထားသောဤအဆင့်တွင်ဒုတိယမျိုးဆက် EGFR-TKI နှင့်ပထမမျိုးဆက် EGFR-TKI နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ပထမအဆင့်လေ့လာမှုဖြစ်သည် သုတေသီများသည် dacomitinib (လူနာ ၂၂၇) သို့မဟုတ် gefitinib (၂၂၅ လူနာ) ရရှိရန်လူနာ ၄၅၂ ယောက်ကိုစာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ ဦး နှောက် metastases နှင့်အတူလူနာအရည်အချင်းပြည့်မီကြဘူး။
၂၂.၁ လ၏ပျမ်းမျှနောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးမှုတွင် dacomitinib အတွက်ပျမ်းမျှ PFS သည် ၁၄.၇ လနှင့် gefitinib အတွက် ၉.၂ လဖြစ်သည်။ လူမျိုးကွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုများက dacomitinib ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ပြီးပြည့်စုံသောတုံ့ပြန်မှု (၁၂) ခုကို dacomitinib အုပ်စုတွင် ၄ င်းအား gefitinib အုပ်စုမှ ၄ ခုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရည်မှန်းချက်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းသည်အလားတူဖြစ်သည် (dacomitinib အတွက် ၇၅% နှင့် gefitinib အတွက် ၇၂%; P = .22.1)
dacomitinib ကိုလက်ခံရရှိသည့်လူနာ ၂၁ ယောက်သည်ပြင်းထန်သောကုသမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ gefitinib ကိုလူနာ ၁၀ ယောက်လက်ခံရရှိခဲ့သည့်အတွက်ယင်းသည်မှန်ကန်ခဲ့သည်။ dacomitinib နှင့် 10 ကို gefitinib အတွက်ရရှိသောလူနာ ၂ ဦး အတွက်ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သောသေဆုံးမှုများကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
စာရေးသူများက“ dacomitinib ကုသမှုသည်သာလွန်သည် Gefitinib [PFS] နှင့် EGFR-mutation-positive NSCLC ရှိလူနာများကိုပထမအဆင့်ကုသမှုတွင်တုန့်ပြန်မှုကြာချိန်နှင့်ဤလူ ဦး ရေအတွက်ကုသမှုအသစ်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ "
စျေးကွက်တွင် dacomitinib အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ / ထုတ်လုပ်သူအမြောက်အများရှိနေပြီး၊ ဤထုတ်ကုန်ကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေသူအားလုံးအတွက်စစ်မှန်သောအရာတစ်ခုရှာဖွေရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ စျေးကွက်တွင် dacomitinib အမှုန့်ကို ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်၊ ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိရှိရန်နှင့်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုယန္တရား၊ ကျွန်ုပ်တို့ dacomitinib အမှုန့်ကိုယူသောအခါမည်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်ကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးသည်၎င်းကိုမ ၀ ယ်မီကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်မှုများဖြစ်သည်။
စျေးကွက်မှအချက်အလက်များကိုလေ့လာပြီးနောက်၊ ပေးသွင်းသူများစွာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက AASraw သည် ၀ ယ်လိုသည့်သူများအတွက်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် dacomitinib အမှုန့်သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုကို cGMP အခြေအနေအောက်တွင်တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်။ အရည်အသွေးကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်မှာယူသောအခါစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာအားလုံးကိုတင်ပြနိုင်သည်။ dacomitinib အမှုန့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်စျေးနှုန်းအတွက်, ငါ့အမြင်, ကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်သင့်သည်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောပေးသွင်းထံမှစျေးနှုန်းအများကြီးရတယ်သောကြောင့်, အရည်အသွေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, aasraw မကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
 Kobayashi Y, Fujino T, Nishino M, et al ။ EGFR T790M နှင့် C797S ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ dacomitinib မှဝယ်ယူခုခံ၏ယန္တရားများအဖြစ်။ J ကို Thorac Oncol ။ 2018; 13 (5): 727-731 ။ Doi: 10.1016 / j.jtho.2018.01.009 ။
 Kris MG, Camidge DR, Giaccone G၊ အဆုတ်ကင်ဆာအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်သောယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် HER2 သန္ဓေသားဖျက်သိမ်းမှုကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း - HER2-mutant သို့မဟုတ် amplified ကင်ဆာနှင့်အတူလူနာများအတွက် pan-HER tyrosine kinase inhibitor dacomitinib ၏အဆင့် -၂ စမ်းသပ်မှု။ Ann Oncol 2015; 26 (7): 1421-1427 ။ Doi: 10.1093 / annonc / mdv383 ။
 ပန်းခြံ K, Tan EH, O'Byrne K သည်, et al ။ Afatinib နှင့် gefitinib တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်။ EGFR mutation-positive non-cell-lung အဆုတ်ကင်ဆာ (LUX-Lung 7) နှင့်အတူလူနာများကိုပထမအဆင့်ကုသမှုအဖြစ်အဆင့် ၂ ခ၊ open-label၊ randomized control trial ။ Lancet Oncol ။ 2; 2016 (17): 5-577 ။ Doi: 589 / S10.1016-1470 (2045) 16-X ကို။
 Lacouture ME, Keefe DM, Sonis S, et al ။ အဆင့်မြင့် Non- သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာအတွက် dacomitinib- သွေးဆောင်အရေပြားနှင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏ prophylactic ကုသမှုအကဲဖြတ်ရန်တစ် ဦး ကအဆင့် II ကိုလေ့လာမှု (Arch 1042) ။ Ann Oncol 2016; 27 (9): 1712-1718 ။ Doi: 10.1093 / annonc / mdw227 ။
 Reckamp KL, Giaccone, G, Camidge DR, et al ။ ကြိုတင်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုနှင့် erlotinib ၏ပျက်ကွက်ပြီးနောက်အဆင့်မြင့် Non- သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာနှင့်အတူလူနာအတွက်, dacomitinib (PF200299804), ပါးစပ်, နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဒယ်အိုး (လူ့ epidermal ကြီးထွားမှုအချက် receptor) inhibitor ၏အဆင့် 2014 စမ်းသပ်မှု။ ကင်ဆာ။ 120; 8 (1145): 1154-10.1002 ။ Doi: 28561 / cncr.XNUMX ။
 Engelman JA, Zejnullahu K, Mitsudomi T, et al ။ MET amplification သည် ERBB3 အချက်ပြမှုကိုသက်ဝင်စေခြင်းဖြင့်အဆုတ်ကင်ဆာတွင် gefitinib ခုခံမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သိပ္ပံ 2007; 316 (5827): 1039-1043 ။ Doi: 10.1126 / science.1141478 ။
 Liu X, Wang P, Zhang C, et al ။ Epidermal growth factor receptor (EGFR) - အဆုတ်ကင်ဆာ၏တိကျမှန်ကန်သောဆေးပညာခေတ်တွင်ကြယ်တစ်လုံး။ ကျောက်တံတား။ 2017; 8 (30): 50209-50220 ။
 EGFR ဗီဇပြောင်းလဲခြင်း - အပြုသဘော NSCLC အတွက်ရလဒ်များ Girard N. Optimizing: အဘယ် tyrosine kinase inhibitor ဘယ်အချိန်မှာ? အနာဂတ် Oncol 2018 ။
 Inoue A, Kobayashi K, Maemondo M, et al ။ NEJ002 ၏နောက်ဆုံးယေဘူယျရှင်သန်မှုရလဒ်များ၊ EGFR ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ဆဲလ်သေးငယ်သည့်အဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) အတွက်ပထမအဆင့်ကုသမှုအဖြစ် gefitinib အား carboplatin (CBDCA) နှင့် paclitaxel (TXL) နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့်အဆင့် ၃ စမ်းသပ်မှု။ J ကို Clin Oncol 2011; 29: 7519 ။
 Sequist LV, Yang JC, Yamamoto N, et al ။ EGFR ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူသွားကြောင်းအဆုတ် adenocarcinoma နှင့်အတူလူနာအတွက် afatinib သို့မဟုတ် cisplatin ပေါင်း pemetrexed ၏အဆင့် III ကိုလေ့လာမှု။ J ကို Clin Oncol 2013; 31: 3327-34 ။
 et al လင်း JJ, Cardarella S, Lydon, CA ။ EGFR-Mutant Metastatic အဆုတ် Adenocarcinoma တွင်ငါးနှစ်အသက်ရှင်ရန် EGFR-TKIs နှင့်ကုသခဲ့သည်။ J ကို Thorac Oncol 2016; 11: 556-65 ။
8811 Views စာ
MAGL inhibitor နှင့် FAAH တားစီး: JW-642 & OL-135 & PF-750
Lenvatinib ကင်ဆာအတွက်လမ်းညွှန်အချက်အလက်များ - AASraw Erlotinib ကိုအသုံးမပြုမီမည်သည့်အချက်အလက်ကိုသင်သိထားရမည်နည်း